Silicon dahaarka Maro adag Fabric
Dharka Fiber Kaarboon
Polyurethane dahaarka Maro Maro
Aluminium -bireed Fiberglass Fabric
Looxa dahaarka Maro adag Fabric
PTFE Maro Maro adag
Haddii aad isticmaashay jiirka ciyaarta ugu fiican, dareemeheeda aadka u saxda ah, DPI-ga sare iyo cagaha PTFE oo siman dhammaantood lama kala sooci karo dusha sare si loo dhaqaajiyo. Dabcan, jiirkaaga waa la raadin karaa iyada oo aan lahayn suuf u go'an, laakiin si fiican uma socon doono, waxaana laga yaabaa inay kugu kacdo wareeg. Tani waa sababta aad ...
38 waxyaalood oo loogu talagalay dadka caajiska ah laakiin doonaya guri nadiif ah
Qor taariikhda aad ogaatay in qaar ka mid ah qalabka guryaha ee aad dayacday ay leeyihiin sumado nadiif ah maanta. Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay badeecadaha aan kugula talineyno! Dhammaan kuwan waxaa si madaxbannaan u soo xulay tafatirayaashayada. Fadlan ogow haddii aad go'aansato inaad wax ka iibsato iskuxirayaasha boggan, BuzzFeed ayaa laga yaabaa inay ...
Fiber galaas galaas elektaroonik ah marada dahaarka
Dahaarka korontada maro fiber galaas, dahaarka kaamerada maro fiber galaas - qaybaha ugu muhiimsan. Qaybaha ugu muhiimsan waa silica, alumina, oxide calcium, boron oxide, magnesium oxide, sodium oxide, iwm sida ku cad maaddada alkali ee dhalada ku jirta, waxaa loo qaybin karaa anti-corrosion FRP c ...
Halabuurka iyo sifooyinka fiber galaas
Muraayadda loo isticmaalo in lagu soo saaro fiber galaasku way ka duwan tahay ta alaabta kale ee dhalada ah. Muraayadda loo isticmaalo fiilooyinka laga ganacsado adduunka waxay ka kooban tahay silica, alumina, oxide calcium, boron oxide, magnesium oxide, sodium oxide, iwm sida ku cad maaddada alkali ee ku jirta dhalada, waxay ...
Ku saabsan fiber galaas
Kala -soocidda fiilooyinka dhalada Sida waafaqsan qaabka iyo dhererka, fiber galaaska waxaa loo qaybin karaa fiber joogto ah, fiber dherer go'an iyo dhogor galaas; Marka loo eego halabuurka dhalada, waxaa loo qaybin karaa alkali bilaash ah, kiimiko u adkaysta, alkali sare, alkali dhexdhexaad ah, xoog sare, ela sare ...
Astaamaha fiber galaaska
Fiber galaasku wuxuu leeyahay iska caabin heerkulka oo ka sarreeya fiber organic, gubasho aan ahayn, iska caabinta daxalka, dahaarka kulaylka wanaagsan iyo dahaarka dhawaaqa (gaar ahaan dhogor dhalada ah), xoogga gilgilashada sare iyo dahaarka korantada ee wanaagsan (sida fiber galaaska bilaa alkali ah). Si kastaba ha noqotee, waa jilicsan yahay oo wuu liitaa waxaan ...
Alxanka suuqa buste dabka iyo koboca 2021-2028
Dukumintiga cilmi -baarista suuqa buste dabka alxanka ujeedadiisu waa inuu bixiyo macluumaad tirakoob ah, sida saadaasha iibka warshadaha, heerka kobaca sanadlaha ee isku dhafan, arrimaha wadista, caqabadaha, noocyada wax soo saarka, baaxadda dalabka iyo duruufaha tartanka. Baaritaanka suuqa busta dabka ee alxanka wuxuu bixiyaa ...
Fiber galaasku waa qalab aad u fiican oo dahaarka leh! Fiber galaasku waa maaddo aan macdanta lahayn oo leh astaamo aad u fiican .. Qaybaha waa silica, alumina, calcium oxide, boron oxide, magnesium oxide, sodium oxide, iwm. Waxay qaadataa kubbadaha galaaska ama galaaska qashinka sida alaabta ceyriinka ah iyada oo loo marayo cadho ...
38 waxyaalood oo loogu talagalay dadka caajiska ah laakiin doonaya ...
Fiber galaas fasalka Electronic dahaarka c ...
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan Reserved Rights. Talooyin - Alaabta Kulul - Khariidadda bogga
4x4 Fiber Kaarboon Twill, Fiber Kaarboon -xidhkii, Dharka Kaarboon Fiber Kaarboon, Twill Weave Fiber Kaarboon, Dharka Silikoon, 2x2 Fiber Kaarboon Twill,